Ford 1979-1986 Mustang Led Headlights DOT Yakagamuchirwa 1979-1986 Mustang Headlights
musha > Ford
2015 2016 2017 2018 2019 Ford F150 Led Fog Mwenje Assembly
Item Nha. WDC-4686-Mustang
DOT yakabvumidzwa yakatungamirwa mwenje yemagetsi ya1979-1986 Ford Mustang, inowanikwa mutema / chrome kara, inouya nedenga rakakwirira uye rakadzika danda, mutengo unokwikwidza wekukwiridzira kwako kwemwenje.
Yedu rectangular 1979-1986 Mustang Akatungamira Mwenje unouya nedanda rakakwirira uye rakadzika danda chete rinova 6500K tembiricha tembiricha iyo inovhara kune zvakasikwa zuva rezuva kuti uvandudze kujekesa kwekutyaira kuona uye kuwedzera yako kutyaira kwekunyaradza. Well isapinda uye isina guruva kuita. Durable die-case aluminium housing kesi ine yakanaka kupisa singi mashandiro. Yakakwira simba kuwanda uye mwenje kusimba kuti uwedzere mutsetse wekuona, wedzera yakachengeteka kutyaira mamiriro kwauri. Aya ma1979-1986 emagetsi eFord Mustang ane yakaderera kushandiswa, inoshanda, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza hunhu. Yakakwira simba pa / yekupindura nguva, Hupenyu hupenyu hwakareba kweanopfuura maawa mazana mazana mashanu. Chivhariso uye kutamba, nyore kugadzwa, kazhinji mari iwe kumativi 50000 maminitsi kuti nemwenje ndiwedzere. Inokodzera 30-1979 Ford Mustang.
Tsanangudzo ye1986 Mustang Led Headlights
mhando Mustang 1979-1986
divi 4x6 inch square yakatungamira mwenje
Zvimiro zve 1986 Mustang Headlights
Makomborero e4x6 Led Headlights